4th December 2021, 09:47 pm | १८ मंसिर २०७८
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत ७ प्रदेशमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रकिया सुरु भएको छ। शनिबार ६ प्रदेशमा मतदान भयो।
प्रदेश २ मा भने मतदानको सुरसार छैन। सातै प्रदेशमा केन्द्रीय तहका नेताहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरु सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गरी दुई फ्याकमा बाँडिएका छन्। वाग्मतीमा भने कृष्णप्रसाद सिटौला गुटको बिँडो भीमसेनदास प्रधानले थामेका छन्। यसरी प्यानलै चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरुको मत परिणाम कस्तो आउला? अहिले धेरैको ध्यान यसैले तानेको छ।
प्रदेश १ मा घिमिरे कि थापा?
प्रदेश १ कांग्रेस हाँक्न झापाका उद्धव थापा र मोरङका गुरुराज घिमिरे चुनावी मैदानमा छन्। झापाका थापा सिटौला निकट नेता हुन्। उनलाई केन्द्रीय सभापति देउवाको पनि साथ छ। यता घिमिरे पौडेल पक्षका साझा उम्मेद्वार हुन्। घिमिरेलाई केन्द्रीय सभापतिमा दाबी गरिरहेका डा शेखर कोइरालाको समेत साथ छ।
अहिले प्रदेश १ को अधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसमेत सिटौलाको काँधमा छ। प्रदेश १ को जिल्ला अधिवेशनमा सभापतिहरु संस्थापन पक्षको धेरै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थापन पक्ष बलियो देखिए पनि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा फ्याक्टरले सिटौलालाई साथ नदिए गुरु घिमिरे प्रदेश १ को कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित हुने बताइएको छ।
प्रदेश २ मा अन्योल कायमै
प्रदेश २ मा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। यहाँका ८ जिल्लाका ३२ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हालसम्म सात वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन नभएकाले प्रदेश अविधेशन स्थगित भएको निर्वाचन समिति सदस्य अरुण यादवले बताए।
अन्यौताबीच प्रदेश अविधेशनमा देउवा समूहबाट रौतहटका सभापति कृष्णा यादव, उपसभापति विमलेन्द्र निधि समूहबाट प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह निकटका रञ्जीत कर्णले प्रदेश सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। उपसभापति निधिको बलियो पकड रहेको यस प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन हुन नसक्नुमा सभापति देउवाको खेल हुन सक्ने बताइएको छ। देउवाले निधिलाई 'देखाइदिन' अधिवेशन लम्बाइएको निधि निकट नेताहरु बताउँछन्। तर निधि आफैँले पनि आफ्नो प्रदेशमा समयमा अधिवेशन गराएर आफैँ असफलतातिर लागेको उनीहरुको तर्क छ।
वाग्मतीमा बानियाँ कि केसी?
वाग्मती प्रदेश पौडेल पक्षको बलियो पकड रहेको क्षेत्र हो। यहाँ काठमाडौं, चितवनलगायत क्षेत्रमा प्रकाशमान सिंहको बलियो पडक छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट र धादिङमा पनि पौडेल पक्षको राम्रो पकड रहेको छ। यद्यपि १४औँ महाधिवेशनमा पौडेलले आफ्नो पकड गुमाउँदै लगेको छ।
यहाँ देउवा पक्षका इन्द्रबहादुर बानियाँ प्यानलैसहित चुनावी मैदानमा छन्। पौडेल प्रकाशमान केसी परिवारको तर्फबाट जगदीश्वरनरसिंह केसी सभापतिका दाबेदार हुन्। यता सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान चुनावी मैदानमा छन्। पछिल्लो अधिवेशनबाट देउवाले वाग्मती प्रदेशमा आफ्नो पकड बलियो पार्दै ल्याउँदा वाग्मतीमा बानियाँ बलिया उम्मेद्वारका रुपमा देखिएका छन्। यसले पनि बानियाँलाई सजिलो हुँदै गएको छ।
वाग्मतीमा तीन जनाको उम्मेद्वारी परेकोले मतदान दोस्रो चरणमा धकेलिने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा सिटौला पक्षका प्रधान कमजोर हुने र उनले जसलाई समर्थन गर्छ उही उम्मेद्वार वाग्मतीको कांग्रेस सभापति बन्ने बताइएको छ।
गण्डकीमा शर्मा कि जोशी?
गण्डकीमा देउवा पक्ष र पौडेल पक्षधर गरी दुई प्यानल प्रतिस्पर्धामा छ। देउवा पक्षबाट प्रदेश सभापतिमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी मैदानमा छन् भने पौडेल पक्षबाट शुक्रराज शर्मा छन्। मत गणनाको सुरुवाती चरणमा जोशी र शर्माको कडा टक्कर परेको देखिन्छ।
गण्डकीमा पौडेल पक्ष यसअघि बलियो मानिए पनि पछिल्लो समय देउवा पक्षले आफ्नो पकड जमाउँदै लगेको देखिन्छ। देउवा पक्षका वजनदार नेता अर्जुन जोशीले आफ्नो जिल्लामा पकड बनाउन सफल भए पनि गोपालमान श्रेष्ठले गृह जिल्ला स्याङ्जामा पकड गुमाएका छन्।
गण्डकीमा समग्रमा प्रदेशमा पौडेल पक्ष ५५ प्रतिशत र देउवा पक्ष ४५ प्रतिशत पकड रहेको नेताहरु बताउँछन्। जिल्लागत हिसाबले कास्कीमा पौडेल पक्षका ६५ र देउवाका ३५ प्रतिशत समर्थक छन्। सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि कास्कीमा रहेकाले पौडेल पक्षका लागि फाइदाजनक छ। तर, संस्थापन पक्षको चलखेलले पौडेल पक्षमा रहेको मत यथावत रहन सक्नेमा भने नेताहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। यसले गण्डकीको कांग्रेस सभापतिमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
लुम्बिनीमा शाह कि पुन?
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश नेतृत्वको लागि अमरसिंह पुन र भरतकुमार शाह चुनावी मैदानमा छन्। शाहलाई देउवा समूहको साथ छ। प्रतिनिधि सभा सांसद रहेका शाह सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन्। शाह संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत हुन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण शाहलाई जिताउन चुनावी मैदानमा खटेका छन्। खाणलाई कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन गर्न संयोजकका रुपमा खटे पनि उनको उपस्थितिले अधिवेशन प्रभावित हुने देखिन्छ।
पौडेल पक्षबाट उम्मेद्वार रहेका पुन रोल्पाका पूर्व सभापति हुन्। जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा सक्रियतापूर्वक लाग्ने पुन चर्चित नेता हुन्। उनको पक्षमा पाका नेताहरुसमेत रहेको बताइएको छ। १२ जिल्ला रहेको रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ९ जिल्ला सभापतिले पुनलाई समर्थन गरेका छन्। यसले पनि यहाँको मत परिणाम रोचक रहने देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको सभापति पदका लागि त्रिपक्षीय भीडन्त हुने भएको छ।
प्रदेश सभापतिका लागि देउवा निकट ललितजंग शाही र संस्थापन पक्षकै भनेर चिनिएका निधि निकटका मोतीराज बम र संस्थापनइतर पौडेल पक्षबाट भुपेन्द्रजंग शाहीले उम्मेद्वारी दिएका छन्।
देउवा समूहका ललितजंग जुम्लाका हुन् भने मोतीराज र भुपेन्द्रजंग कालीकोटका। मोतीराज यसअघि जिल्ला सभापतिमा समेत उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए। यद्यपि, सहमतिबाट टुंगो लगाएसँगै उनी फुत्किएका थिए। तीन जनाको उम्मेद्वारी परेकोले यहाँ पनि मतदान दोस्रो चरणमा धकेलिने सम्भावना छ। यद्यपि तीनै पक्ष पहिलो मत परिणाममै पहिलो बन्ने दाउमा छन्।
सुदुरपश्चिममा बलायर कि मिश्र?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा संस्थापन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर र पौडेल पक्षबाट प्रदेश सभापतिमा कैलालीका पूर्व सभापति नारायणदत्त मिश्र चुनावी मैदानमा छन्।
सुदूरपश्चिममा प्रदेश अधिवेशन संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडु हुन्। उनी पौडेल पक्षका नेता हुन् तर यस प्रदेशमा देउवा पक्षको दबदबा रहेको छ। यसले बलायर बलिया उम्मेद्वारका रुपमा उभिएका देखिन्छन्। बलायरलाई पाका नेताका रुपमा समेत अर्थ्याइएको छ। यद्यपि यस प्रदेशमा संस्थापन समूहबाटै रमेश लेखक र एनपी साउदको टक्कर रहेको छ। यता डडेल्धुराका प्रदेश सांसद कर्ण मल्ल पनि देउवाबाट रुष्ट छन्। यस्तो अवस्थामा मिश्रले फाइदा लिन सक्ने बताइएको छ।